९० वर्षीय पिताको हातबाट बाबुराम भट्टराईले लगाए टिका « Etajakhabar
प्रकाशित मिति : २१ आश्विन २०७६, मंगलवार १४:०१
काठमाडौं : पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले दसैंको टिका ग्रहण गरेका छन् । उनले ९० वर्षीय पिता भोजप्रसाद भट्टराईको हातबाट टिका ग्रहण गरेकाहुन्। दसैंको टिका ग्रहण गरेको फोटो राख्दै भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन्: ‘९० बर्षीय पिता भोजप्रसाद भट्टराईको हातबाट सपरिवार शुभविजयादशमीको टीका ग्रहण गरियो, सबैको जय होस् !असत्य र अन्याय माथि सत्य र न्यायको विजय होस् !
हिन्दूहरुको महान चाड बडादशैँँको दशमीका दिन आज मान्यजनबाट टीका, जमरा र प्रसाद लगाइँदै छ । पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले टीकाको उत्तम साइत आज बिहान १० बजे ३५ मिनेटका लागि तोकेअनुसाको समयमा टीका लगाउने प्रचलन छ ।
दशैँँमा दक्षिणाका रुपमा नयाँ नोटका साथै नयाँ कपडा, फलफूल र अन्य सामग्री उपहार दिने पनि चलन हो । काठमाडौँ उपत्यकाका सडकमा टीका थाप्न जाने आउनेको चहल पहल शुरु भएको छ । दशैँँको विदा भएको र काठमाडौँ बाहिर दशैँँ मान्न ठूलो सङ्ख्यामा मानिस गएकाले काठमाडाँैको सडक भने प्राय ः सुनसान देखिएको छ ।